China SPC Floor SM-023 Ukwakha kanye nefektri | I-Aolong
I-3.7mm SPC FLOOR (N) 1
3.7mm SPC IPHANSI (N) 2
I-4mm SPC IPHANSI
I-4mm SPC FLOOR (N)
I-4.5mm SPC IPHANSI
I-4.5mm SPC IPHANSI (N)
5mm SPC IPHANSI
5.5mm SPC IPHANSI (N)
6mm SPC IPHANSI
I-6mm SPC FLOOR (N)
I-8mm WPC FLOOR (N)
10.5mm WPC PHANSI (N)
12mm WPC PHANSI (ABA)
12mm WPC PHANSI (elingenalutho)
SPC Phansi SM-056
SPC Phansi SM-055
SPC Phansi JD-063
SPC Phansi JD-062
SPC Phansi JD-061
SPC Phansi JD-060
Isitezi se-SPC 1903
Isitezi se-SPC 1902
Isitezi se-SPC 1901
Isitezi se-SPC 503
Isitezi se-SPC 501
SPC Phansi SM-053
SPC Phansi SM-023
SPC Phansi SM-021
SPC Phansi SM-020
Isitezi se-SPC 207
Isitezi se-SPC 203
Isitezi se-SPC 202
Isilinganiso somlilo: B1
Ibanga elingangenwa manzi: qedela
Ibanga lokuvikelwa kwemvelo: E0
Abanye: i-CE / SGS
Incazelo: 1210 * 183 * 4mm
1. Green ukuvikelwa kwemvelo. Iphansi le-SPC wuhlobo olusha lwempahla yaphansi olwakhiwe ngokuphendula ekunciphiseni ukungcola kukazwelonke. I-PVC, into eluhlaza eluhlaza engaphansi kwe-SPC, iyinsiza evuselelekayo imvelo futhi engeyona enobuthi. I-100% mahhala ye-formaldehyde, lead, benzene, izinsimbi ezisindayo, carcinogens, volatiles encibilikayo nemisebe. Kungukuvikelwa kwemvelo ngokwemvelo. Iphansi le-SPC yinto yangaphansi evuselelekayo, ebaluleke kakhulu ukuvikela imithombo yemvelo kanye nemvelo yemvelo yomhlaba wethu.
2. I-100% engenamanzi, i-PVC ayinabudlelwano namanzi, futhi ngeke ibe nomkhuhlane ngenxa yomswakama omkhulu. Ngenkathi yezimvula izindawo eziningi eziseningizimu, iphansi le-SPC ngeke lithintwe ukususwa umswakama, kuyisinqumo esihle phansi.
3.Ukuvimbela umlilo: ibanga lokuvikela umlilo lesitezi se-SPC yi-B1, ilandela ngetshe kuphela. Izocima ngokuzenzakalela ngemuva kwemizuzwana emi-5 kude nelangabi. Kuyinto ilangabi cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi, okungekhona okomlilo okuzenzakalelayo, futhi ngeke ikhiqize amagesi anobuthi futhi ayingozi. Ifanele imicimbi enezidingo zomlilo eziphezulu.
4. I-Antiskid. Uma kuqhathaniswa nezinto ezijwayelekile zaphansi, i-nano fiber floor izwa i-astringent kakhulu uma inamanzi futhi akulula ukushelela. Lapho ihlangana ngokwengeziwe namanzi, iba namandla ngokwengeziwe. Ifanele imindeni enabantu abadala nezingane. Ezindaweni zomphakathi ezinezimfuno eziphakeme zokuphepha komphakathi, njengezikhumulo zezindiza, izibhedlela, izinkulisa, izikole, njll.
5. Super ukumelana ukugqoka. Isendlalelo sokumelana nokugqoka ebusweni besitezi se-SPC ungqimba olusobala lokumelana nokugqokwa olucutshungulwa ubuchwepheshe obuphezulu, futhi inguquko yalo emelana nokugqoka ingafinyelela cishe kwizinguquko eziyi-10000. Ngokusho kobukhulu besendlalelo sokugqoka, impilo yokusebenza kwe-SPC phansi ingaphezu kweminyaka eyi-10-50. Iphansi le-SPC liyisitezi sempilo ende, ikakhulukazi elungele izindawo zomphakathi ezinokugeleza okukhulu kwabantu nezinga eliphezulu lokugqoka.
6. Ukukhanya kwe-Ultra nokukhanya okuncane kakhulu, iphansi le-SPC linobukhulu obucishe bube yi-3.2mm-12mm, isisindo esincane, esingaphansi kuka-10% wezinto ezijwayelekile zaphansi. Ezakhiweni eziphakeme kakhulu, kunezinzuzo ezingenakuqhathaniswa zokuthwala izitebhisi nokonga isikhala, futhi kunezinzuzo ezikhethekile ekuguqulweni kwezakhiwo ezindala.
7. Ilungele ukufudumeza phansi. Isitezi se-SPC sinokuhanjiswa okuhle kokushisa nokushiswa okufanayo kokushisa. Iphinde idlale indima yokonga amandla emindenini esebenzisa isithando somlilo esidongeni ukushisa ukushisa kwaphansi. Isitezi se-SPC sinqoba ukukhubazeka kwetshe, i-ceramic tile, i-terrazzo, iqhwa, amakhaza nokushelela, ngakho-ke kungukukhetha kokuqala kokushisa phansi.
Ukuthungwa Kwendawo Engaphezulu Ukuthungwa Kwezinkuni
Ubukhulu Sekukonke 4mm
Ukubekwa phansi （Ongakukhetha） I-EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gqoka ungqimba 0.2mm. (8 Mil.)
Ukucaciswa kosayizi 1210 * 183 * 4mm
Imininingwane yobuchwepheshe baphansi kwe-spc
Ukuqina kwesilinganiso / i-EN ISO 23992 Kuphumelele
Ukumelana ne-Abrasion / EN 660-2 Kuphumelele
Slip ukumelana / i-DIN 51130 Kuphumelele
Ukumelana nokushisa / EN 425 Kuphumelele
Umthwalo Static / EN ISO 24343 Kuphumelele
Ukumelana ne Wheel caster / Pass EN 425 Kuphumelele
Ukumelana namakhemikhali / EN ISO 26987 Kuphumelele
Ukubhema kwentuthu / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Kuphumelele
Langaphambilini SPC Phansi SM-022
Olandelayo: SPC Phansi SM-050
SPC Phansi SM-028
SPC Phansi SM-022
SPC Phansi SM-027
SPC Phansi SM-025
Ikheli: No. 3 Xiwu Lane, Qiqin Industrial Park, eDanyang Development Zone.
Ucingo: +86 13775507979